Rosia: Ny haben’ny fandraisana andraikitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2018 12:02 GMT
Mamaritra ny penina fandokony amin'ny zavamisy maro ambaratonga ao Rosia i Marat Gelman mpisera LJ galerist , Rosiana mpivarotra zavakanto, ary voalaza fa mpanolotsaina miafina an'i “Victor Yanukovych” tamin'ny taona 2004:
Nanasa ahy ho ao amin'ny fandaharan'izy ireo hariva, amin'ny 9 ora alina, [ny Radio Mayak an'ny fanjakana]. Nisy ankizivavy iray manankaratra hiditra sy mivoaka nankeo amin'ny vavahady ary niantso ahy. Nilaza azy ny mpiambina (toy ny hoe tsy misy aho): Tsy avelako hiditra izy. Mamo izy. Hitako nivembena izy. (Nataoko teo an-tsofiko ny iPod, ary tsy maintsy nanao dihy kely aho raha niandry). Ary tsy nety mihitsy izy. Ka hoy aho, Eny, tsara, tsy mila fanontaniana betsaka, manana zavatra hafa atao aho. Nivandravandra ny mason'ilay tovovavy. Efa vonona hofoanana ny fandaharana. “Marat Aleksandrovich,” hoy izy nanontany, “nisotro toaka ve ianao?”
Tsy tanako intsony ny fihomehezako. Nivoaka nifoka sigara aho no sady nanery ny mpiambina niaraka tamin'ny fanampian'ireo lehibeny izy. Afaka niala aho, na izany aza, nanan-jo ara-moraly hanao izany aho. Ary avelao izy ireo no hanapa-kevitra “iza no nahatonga ny fanafoanana ny fandaharana”.
Raha nanapa-kevitra ny manampahefan'ny habantseranana tao amin'ny [Seranam-piaramanidina Sheremetyevo] fa mahatsiravina eo imason'ireo izay tia an'i Potinina [ny asan’] ny [Blue Noses, “ireo mpamazivazy ny sehatra zavakanto Rosiana], lavitra ihany koa ireo lehibeny ary [tsy avela mivoaka ny firenene] ny sary hosodoko. Avy eo [nanoratra ny media Tandrefana fa nanomboka sy nanao sivana ny fitondrana Potinina].
Ny hevitro dia hoe manao zavatra betsaka amin'ny fitondran'i Potinina ireo mpiasan'ny habantseranana adala ireo tahaka ity mpiambina ny tranoben'ny birao ity manao zavatra betsaka amin'ny [Mayak Radio]. Saingy ilaina ho an'ireo lehibe ny mandalondalo mijery akaiky tsindraindray.
Mpamaky vitsivitsy no tsy niombon-kevitra tamin'i Gelman, mazava ho azy:
Yes, it's funny. Everything's still there. A guard (aka as a [hotel guard], aka as “an old lady sitting by the entrance”) remain kings in our reality and turn this reality into [sovok], and sovok has a really strong base at some level exactly because it relies on the feelings that motivate such a “guard” – to get satisfaction from exercising authority without any personal financial gain. Spirituality, in a way 🙂 […]
Manana zavatra tokony hatao amin'izany izy ireo, ny roa tonta. Ireo lehibe no mamaritra ny fitondran-tenan'ireo mpiasa. Ary noho izany, teo ambanin'ny fitondrana hafa, samy nanana fahatakarana samihafa tamin'ny andraikitr'izy ireo ny roa tonta.
Eny, mampihomehy izany. Mbola eo foana ny zava-drehetra. Ny mpiambina (fantatra amin'ny maha-[mpiambina hotely], antsoina hoe “vehivavy antitra iray mipetraka eo am-baravaram-pidirana”) dia mijanona ho mpanjaka eo amin'ny zava-misy iainantsika ary mamadika ity zava-misy ity ho [sovok], ary ny sovok dia manana fototra matanjaka tokoa amin'ny ambaratonga sasany satria miankina amin'ny fahatsapana mampavitrika “mpiambina” toy izany – mba hahazoana fahafaham-po amin'ny fampiharana fahefana tsy mahazo tombony ara-bola manokana. Ara-panahy, amin'ny fomba iray 🙂 […]
Raha tsy misy olona voasazy noho ny fahafatesan'ny ekipa ambanin-dranomasina ary mitsiky ny filoham-pirenena ho setrin'izany, ary rehefa tsy misy intsony ny sazy ampiharina amin'ny fampiasana grenady sy fiara mifono vy any an-tsekoly [tany Beslan, tamin'ny Sept. 2004], izany no fotoana nanombohan'ireo mpiambina sy mpiasan'ny ladoany mahatakatra fa tsy misy olona hanasazy azy ireo amin'ny zavatra rehetra ataony, fa ny zavatra rehetra dia ho voavela sy ho adinoina. […]